Doorashada 2017: Diyaargarawga Laacibiinta, Xamaasada Taageerayaasha iyo Muhiimadda Siidhiwalaha | Qaran News
Doorashada 2017: Diyaargarawga Laacibiinta, Xamaasada Taageerayaasha iyo Muhiimadda Siidhiwalaha
Writen by Qaran News | 4:26 pm 11th Oct, 2017
Sida lawada ogsoon yahay waxa inagu soo foole doorashadii madaxweynaha ee Jamhuuriyada Somaliland. Waana doorasho muhiima oo dalka gudihiisa iyo dibediisaba aad loogu dhegtaagayo loona xiisaynaayo. Markaad dhinac ka eegto waa iska caadi oo dee dalku wuu soo arki jiray doorashooyin heerar kale duwan hadday tahay mid madaxweyne, mid baarlamaan iyo mid goleyaal deegaanba. Dhanka kale markaad ka eegto Somaliland oo jirtay haatan in kabadan rubuc qarni, doorashada madaxweyne ee bisha soo socota la filayaa waa mid xiiso gaara u samanaysa bulshada waddankan maadaama uu madaxweynaha doorkan ladoortaa uu saamayntii ugu balaadhnayd ku yeelan karo mustaqbalka dalka. Waxa kaloo jira wahadaladii Somalia iyo Somaliland oo taagan meelay qabyo weyni ka muuqato iyo xidhiidhka wajiyada badan ee dalka Imaaraatka carabtu uu la yeeshay Somaliland haday noqoto maamulka dekeda Berbera iyo hadday noqoto saldhiga military ee dalkaasi laga siiyay isla magaalada Berbera. Waxa kaloo jirta in Itoobiyana ay koruqaaday meeqaamkii xafiiska ay Somaliland ku leedahayd magaalada Addis Ababa taasoo dadka qaar ay u arkaan hal talaabo oo loo qaaday dhinaca ictiraaf caalami ah oo ay Somaliland hesho. Waxa kaloo jira shidaalka laga baadhayo balooga loo yaqaan Odweyne Block kaasi oo ay gacanta ku hayaan shirkado caalamiya oo isutegey isla markaana waxa suurtogala in mustaqbalka dhaw shidaalkaa lasoo saaro taasoo hadday dhacdo wax weyn ka bedelaysa dhaqaalaha waddanka iyo xidhiidhka aynu laleenahay adduunyada intiisa kale. Waxa kaloo jirta inay aad u bateen dadka reer Somaliland ee fahmay muhiimadda uu leeyahay kaadhkooda codaynta iyo saamaynta uu lafahooda ku yeelan karo madaxweynaha soo baxaa. Waxa door muhiima ciyaaraya internetka iyo waxan loo yaqaano barkulanka bulshadda ama “social media”.
Intaa kadib waxaan rabaa inaan inyar ka idhaahdo tartanka loogu jiro dhalinta goolka maalinta doorashada ee 13ka bisha November. Maalinta doorashadu waa ciyaartii faaynalka. Waxaan odhan karaa labada xisbi waxay ka dhigan yihiin laba tiim kubadeed oo isu diyaarinaya sidii ay ukala calaf qaadi lahaayeen maalinta faaynalka oo ah maalinta doorashada. Labadaa xisbina waa Waddani iyo Kulmiye. Xisbiga saddexaad ee UCID lama filayo saamayn uu ku yeesho ciyaartaa faaynalka ah sidaa daraadeed waxaynu hadalka kusoo koobaynaa ciyaarta labada laacib ee kale.
Labada laacib ee kala aha Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) iyo Muuse Biixi Cabdi (MBC) ayaa maalintaa ciyaaraya dadkuna way daawan doonaan. Siidhiwaluhuna wuu ku kala dhex jiri doonaa. Garoonkuna waa dalkoo dhan. Maalinta la seexan maayo ilaa la ogaado natiijada ciyaarta.
Ciyaarihii faaynalka kasii horeeyey in muddo ah way socdeen waxayse sii kululaanayaan inta kahadhay faaynalka. 30ka cisho ee soo socda ayaa la ciyaarayaa kuwaartar faaynalkii iyo semi faaynalkii ciyaarta.
Hadaan usoo noqono ciyaarta faaynalka ah waa ciyaar aan sahlanayn oo loo baahan yahay inay cid kastaa doorkeeda si fiican u gudato.
Aan soo qaadano taageerayaasha labada dhinac. Taageerayaasha waxa looga baahan yahay inay ilaaliyaan habsami usocodka ciyaarta. Waxa loo baahan yahay inay muujiyaan degenaansho iyo buuq la’aan. Way iska cadahay haddii ay taageerayaasha ciyaartu ay buuq iyo rabshad la yimaadaan inay ciyaartu xumaanayso oo rabshada garoonka gudihiisa ka dhacdaa waxay keeni kartaa in ciyaartooyga iyo siidhawalaha labaduba ay ka lunto halkay diirada ku hayeen oo ah kubada iyo goolka isla markaana waxa dhici karta in lagu murmo goolku miyuu dhashay mise muu dhalan arrintaasina waxay ku danbayn kartaa madmadaw iyo kala shaki iyo buuqii taageerayasha oo sii bata iyo inay hayadihii nabadgelyadu ay ku wareeraan xalinta buuqa goobta ka dhashay. Hadday hayadaha nabadgelyadu dawakhaana nahaayadu waxay noqon kartaa nabadgelyada garoonka oo faraha ka baxda sidaana ay cidwaliba ku khasaarto.
Siidhawalahana waxaa laga rabaa inuu la yimaado degenaansho iyo feejignaan saayida maadaama la ciyaarayo faaynalkii. Waa inuu siidhiwalahaasi ogaadaa in talaaba kasta oo uu qaado inuu ciyaarta iyo nihaayadeedaba ku xumayn karo ama uu ku wanaajin karo. Siidhawalaha waxa kaloo laga rabaa inuu muujiyo dhexdhexaadnimo boqolkiiba boqola si ciyaartu ay ugu dhamaato si hufnaana isla markaana ay ku kalsoonaan karaan labada tiim ee ciyaaraya iyo taageerayaashooduba. Siidhiwalaha gacantiisa ayay waxwaliba ku jiraan. Hana ogaado siidhawaluhu hadduu hawshaa si hagar la’aana oo daacadnimo leh uu u guto masuuliyadiisa inuu kasban karo ducada dadka ahlul karamka ah ee ku jira taageerayaasha labada dhinacba. Haddii halkaa uu ka dhasho buuq iyo gacan ka hadal ay sababtay farsamo xumo ka timaada xaga siidhiwalahana arrintaa cagsigeeda ayaa dhacaysa oo ninkaa siidhiwalaha ah waxa ku dhacaysa inkaarta dadweyanaha.
Labada tiim ee ciyaaraya iyaguna saamayn wayn bay ku leeyihiin habdhaqanka ay taageerayaashoodu garoonka la imanayaan. Sidaa darteed labada tiim ee faaynalka ciyaaraya (Cirro iyo MBC) waxa laga rabaa inay qorshahooda udiyaargarawga faaynalka ku darsadaan inay wacyigelin balaadhan siiyaan taageerayaashoodu siiba kuwa dhalin yarada ah oo ay ku wacyigeliyaan inay ilaaliyaan nidaamka iyo kala danbaynta si ciyaartu ay ugu dhamaato si habsami leh oo bilaa buuqa.
Gabagadiina waxaan odhan lahaa ciyaarteena faaynalka ah cidda daawanaysaa maaha uun reer Somaliland. Ciyaartaa waxaa inala daawanaya dadyaw badan iyo dawlado badan oo ajanabiya. Sidaa darteed saddexda qolo ee garoonka wada jooga waxa looga baahan yahay inay muujiyaan habdhaqan ay ku dheehan tahay masuuliyad heersare ahi. Ama ciyaartooy ahaw ama siidhiwale ama taageere ahawoo garoonkaa aad joogtaa waa dalkaagii Somaliland wanaagaaga iyo wanaaga Somaliland wuxuu ku xidhan yahay sida aad hawshaa uga qayb qaadato. Aan kuwada dadaalno sidii ay inoogu dhici ciyaar bilaa buuqa oo bilaa turxaana siddii awalba laynooga bartay.
Midna ogaada oo maalintaa faaynalka iyo maalmaha ka horeeyaba xaraarada jidhku way kacaysaa oo weliba waxa jira xanuuno loo yaqaano xanuunada casriga sida dhiigkarka iyo macaanka. Ha ilaabin inaad jeebada ama boorsada ku sidatid dawadaada uu dhakhtarku kuu qoray iyo inaad biyo badan cabto. Guusha iyo guuldaraduba waxay leeyihiin xaaladaa uu dhiigu kacayo!!!!!!!!!!!
Ciyaar wanaagsan baan idiin rajaynayaa.